Darajo sare: TZH oo kaalinta labaad ka galay 10-ka filim ee lacagaha ugu badan todobaadkooda lixaad soo xareeyeen 10-kaan sano (2010-19) – Filimside.net
Darajo sare: TZH oo kaalinta labaad ka galay 10-ka filim ee lacagaha ugu badan todobaadkooda lixaad soo xareeyeen 10-kaan sano (2010-19)
February 2, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 2, 2018
Tiger Zinda Hai ayaa noqday Blockbuster halyee ah madaama uu ganacsi aan joogsaneyn sameenayo sidoo kalena mudo dheer tiyaatarada baaqi ku yahay.
TZH ayaa todobaadkiisa lixaad keenay 2.60 Crore (Trade Figure) sidaasna wuxuu ku noqday filimka labaad ee 10-kaan sano (2010-19) lacagaha ugu badan soo xareeyo todobaadkiisa lixaad kaliya Baahubali 2 ayaa ka badan oo keenay 5.38 Crore todobaadkiisa lixaad.
Marka laga hadlaayo taariikh ahaan TZH kaalinta 13-aad ayuu ka galay filimada todobaadka lixaad lacagaha ugu badan soo xareeyaan waana guul taariikhi ah.
Horey looma arkin 17-sano ee ugu dambeesay filim Action ah oo sidaan tiyaatarada kaga gadmaayo waxaana sabab u ah awooda Mega Star Salman Khan halka ay taagan tahay 10-kaan sano isaga u gaarka ah.
10-kaan sano aan ku guda jirno (2010-19) waxaa si aan caadi ahayn u gameen TZH iyo Singham oo ah labo filim oo fariin Action ah xambaarsan halka inta kale ee todobaadkooda lixaad ganacsiga ugu badan sameeyeen yihiin filimo fariin waaqici ah oo arimaha bulshada xambaarsan:
Fadlan hoos kaga bogo 10-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen todobaadkooda lixaad 10-kaan sano aan ku guda jirno (2010-19):
1. Bahubali: The Conclusion – 5.38 Crore
2. Tiger Zinda Hai – 2.60 Crore (Qiyaas)
3. Vicky Donor – 1.90 Crore
4. Tanu Weds Manu Returns – 1.75 Crore
5. Zindagi Na Milegi Dobara – 1.70 Crore
6. Dangal – 1.63 Crore
7. Bajrangi Bhaijaan – 1.49 Crore
8. Singham – 1.33 Crore
9. Bajirao Mastani – 1.26 Crore
10. Aashiqui 2 – 1.17 Crore
Dhinaca kale hoos kaga bogo 15-ka filim ee ebid lacagaha ugu badan soo xareeyeen todobaadka 6-aad sida shabakada BOI ku diiwaan gashan:
1. Gadar – Ek Prem Katha (2001) – 6.09 Crore
2. Bahubali: The Conclusion (2017) – 5.38 Crore
3. 3 Idiots (2009) – 4.36 Crore
6. Kuch Kuch Hota Hai (1998) – 3.08 Crore
7. Kabhi Khushi Kabhie Gham… (2001) – 2.97 Crore
8. Taare Zameen Par (2007) – 2.95 Crore
9. Chak De India (2007) – 2.85 Crore
10. No Entry (2005) – 2.76 Crore
11. Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) – 2.75 Crore
12. Dhoom 2 (2006) – 2.69 Crore
13. Tiger Zinda Hai (2018) – 2.60 Crore
14. Rang De Basanti (2006) – 2.56 Crore
15. Kaho Naa… Pyaar Hai (2000) – 2.50 Crore
Waxaa Aqrisay 476
Saaxiibkay Sunny Deol waan ku ogaa geesinnimada.Isagaa kow ah aflaanta ugu sarreeya abid.
sxb zakariye secret super star maad si jogta ah u so gudbisan intu kenay isku dar dal & dibad TZH malin laba waad so gudbisane mise inu ka lacag batay filimkan salman khan sameyay ayad didan tihin inad mujisan markad so gudbisana intu China kaso xareyay unbad shegtan isku dar dal & dibad maad so qortan wali ma aqan salman khan webkan waxa u siiyo sida loga tagersayahan layaba waliba zakariye ali aadan ma ahan